RW Rooble oo la kulmay Guddoomiye Baarlamaan maamul Goboleed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Rooble oo la kulmay Guddoomiye Baarlamaan maamul Goboleed
Ardaan Yare 19 January 2021 19 January 2021
Guddoomiyaha Baarlamaanka dowlad Goboleedka Hirshabeelle oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Guddoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed oo Qoraal soo saaray ayuu ku sheegay in Ra’iisul Wasaare Rooble iyo isaga ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan maamulka Hirshabeelle.
Sidoo kale Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa tilmaamay in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda uu ugu warbixiyay xaaladiihii ugu Hirshabeelle, sidoo kalena uga mahadceliyay taareerada Dowladda Federaalka siiso maamulkiisa.
“Waxaa maanta Xafiiskiisa shaqo ku booqday Raisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble waxaana uga war bixiyay Xaaladaha guud ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo dowrka lama ilaabaanka ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ka qaadanayso taageeridda Hirshabelle” ayuu yiri Guddoomiye Luqmaan.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo XIldhibaano ka tirsan Maamulkaas ayaa ku sugan Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka, iyagoo u jooga howlo shaqo.
DEG DEG:-Kulan u socda Madaxweyne Guudlaawe iyo Taliyaha NISA